Mino, ary manara-dia an’i Jesosy
"(Hoy Jesosy tamin’i Petera:) Manaraha Ahy ianao." Jaona 21:22
"Aza matahotra, minoa fotsiny ihany." Marka 5:36
-Ny hoe mino, dia mino ny Tenin’Andriamanitra izay mampianatra antsika fa namonjy antsika Andriamanitra ary nanome fiainana mandrakizay ho antsika. Ny mpino dia matoky tanteraka an’i Jesosy, Izay naneho ny tenany tamintsika rehetra. Izany no finoana, ho an’ny tsirairay.
-Ny hoe mino, dia miroso, avy eo, manaraka an’i Kristy, Izay mitarika antsika ho amin’ny lalana nosokafany ho antsika, mitondra amina fiainana vaovao tanteraka. Ny hoe mino, dia miara-mandroso amina kristiana, rahalahy sy anabavy mampahery sy mandrisika antsika: «Afaka manova ny fomba fiainanao ianao, mba hankasitrahin’ny Tompo! Afaka miaina ireo teny fampanantenany ianao!»
-Ny hoe mino, dia sahy mandini-tena, amin’ny fanazavan’ny Tenin’Andriamanitra, ary manary ny tahotra sy ireo petra-kevitra mialoha.
-Ny hoe mino, dia mahafantatra, fa na dia eo anivon’ireo tafiotra aza isika, dia miahy antsika Andriamanitra ary mampitony izay misamboaravoara. Efa resy avokoa ny hery rehetra mpitondra fahafatesana, mihodidina antsika.
Toy izay hita matetika ao amin’ny Filazantsara, dia tsy afaka ny hangina ireo izay nifanena tamin’i Kristy. Tiany zaraina ny fifaliana mameno ny fony.
-Ny hoe mino, amin’izay, dia mijoro ho vavolombelona manambara izay nataon’Andriamanitra teo amin’ny fiainantsika.
Ry namana, anio dia mbola miantso ihany Jesosy. Miantso anao manokana Izy! Ary mitaona anao hiroso -na hiroso indray- hanara-dia Azy…